शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड, एकै दिन ९ अर्ब २२ करोड ७३ लाखको कारोबार – Bikash Khabar
शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड, एकै दिन ९ अर्ब २२ करोड ७३ लाखको कारोबार
आइतबार, १४ मंसिर २०७७ गते १९:१३ मा प्रकाशित	Author विकास खबर	Comment(0)	371 Views
काठमाडौं । शेयर बजारमा आज फेरि अर्को नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। शेयर बजारमा आइतबार अहिलेसम्मकै धेरै रू. ९ अर्ब २२ करोड ७३ लाख बराबरको कारोबार भएको छ ।
गत बिहीबार पनि नेप्सेमा रू‍. ७ अर्ब ६१ करोडको कारोबार भएको थियो । आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से ७५ अंकले बढेर १ हजार ९६८ विन्दु पार गरेको छ । यो नेप्सेको अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड हो ।
ब्यांकिङ समूहअन्तर्गतका शेयरको मूल्य बढेपछि त्यसको प्रभाव नेप्से परिसूचकमा परेको हो। आइतबार ब्यांकिङ समूह ७.८१ प्रतिशतले बढेको छ।
यो समूहका कयौं कम्पनीको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ। विकास ब्यांक समूह पनि ८.११ प्रतिशतले बढेको छ। जीवन बीमा, लघुवित्त, जलविद्युत, वित्त लगायतका समूह बढेका छन्। तर, व्यापार, होटल, निर्जीवन बीमा तथा उत्पादनमूलक समूह भने घटेका छन्।
आइतबार सबैभन्दा धेरै ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्यांक, सेन्चुरी ब्यांक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट ब्यांक, सनराइज ब्यांक, माछापुच्छ्र्रे ब्यांक, मुक्तिनाथ विकास ब्यांक, मेगा ब्यांक नेपाल बंगलादेश ब्यांक, महालक्ष्मी विकास ब्यांक, प्रभु ब्यांक लगायतका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत हाराहारीमा नाफा कमाए। आज १०२ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ।
बजार उत्साहजनक ढंगमा बढ्दा पनि ५६ कम्पनीका लगानीकर्ताले भने गुमाएका छन्। सबैभन्दा धेरै विशाल बजार कम्पनीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत नोक्सान बेहोरे। आँखुखोला जलविद्युतका लगानीकर्ताले ६.२५ प्रतिशत घाटा बेहोरे।
आज सबैभन्दा धेरै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको रू. ५१ करोड ८० लाख बराबरको शेयर कारोबार भयो। दोस्रोमा कुमारी ब्यांकको रू. ४० करोड ८० लाख बराबरको शेयर किनबेच भयो। शेयर बजारमा २ करोड ५९ लाख कित्ता शेयर किनबेच भएको थियो।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको सस्तो ब्याजदर, रेमिटेन्सको उत्साहप्रद आप्रवाह लगायतका कारणले शेयर बजार बढेको अनुमान गरिएको छ।
८ पुष,काठमाडौँ । देशकै मुख्य व्यापारी नाका वीरगञ्जबाट आयात तथा र्नियात बढेसँगै भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनमा उलेख्य सुधार भएकोे छ
दैलेख र कालीकोटमा सडक पुग्यो
मान्म । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका र कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । दैलेखको माथिल्लो डङ्गेश्वर, दुल्लु, डाँडमाडी, ब्याउली हुँदै
वाग्मती । वाग्मती प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको विद्युतीय गाडीका लागि चार्जिङ स्टेशन (विद्युत् पुनःभरण केन्द्र) निर्माण गर्न आठ स्थानीय
उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष बने गोल्छा